Dr. Abiyyi Ahmad Hogganaa Chaayinaa Waliin Dubbatan
Muummeen ministera Itoophiyaa Dr Abiy Ahmed imaltuuf Chaayinaa jiru. Chaayinaan hujii investimentii doolara biliyoona tokkoo fi kuma dhibba saddeetii Itoophiyaa keessatti hojjachuu dandeettu hardha irratti walii galan.
Akka dhaabbatti oduu Chaayinaa Shinuhaatti Itoophiyaan akka kanaan Buna Chaayinaatti ergatti.Kana malees akka hujii ijaarasa karaa gurguddaa fi daandii xixxiqaa waliin hojjachuu dandahan irratti mariitti jiran.
Itti gaafatamaan waajjira preesii kan muummee ministera Itoophiyaa obboo Nigusuu Xilahun tana irratti gaazexxesotaaf Chaayinaa keessatti ibsa kennaniin hogganoonni biyyoota lameenii dhimmi irratti qiyyaafatan Afuur ta’u ibsan.
Kunis gama bu’uura misoomaan hidhata jiru, daldala,Turizmii fi hariiroo uummattoota biyyoota lameen gidduu kan ilaaleen akka ture ibsan.
Dhiyeenya kana baala sammuu darreessu deddebisuun shakkamtee Chaayinaa keessatti kan hidhamte Injinar Nazraawit Abarraa kan ilaaleen dubbatamuu isaa Obbo Nigusuu Xilaahun ibsanii jiru.
Ambootti Hiriirri Momii Geggeeffame